Latuda vs. Abilify: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး သတင်း ကုမ္ပဏီ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ရပ်ရွာ၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုန်ပစ္စည်း ရပ်ရွာ ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက်
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Latuda vs. Abilify: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ
Latuda vs. Abilify: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ
Latuda (lurasidone) နှင့် Abilify (aripiprazole) တို့သည် schizophrenia ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးညွှန်းများပါသောဆေးများဖြစ်သည်။ Schizophrenia ထိုကဲ့သို့သောလှည့်စား, စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းနှင့်စနစ်တကျမိန့်ခွန်းသို့မဟုတ်အပြုအမူအဖြစ်လက္ခဏာတွေအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာစိတ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ schizophrenia အပြင် Latuda နှင့် Abilify သည်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုလည်းကုသနိုင်သည်။
Latuda နှင့် Abilify နှစ်မျိုးလုံးကို atypical antipsychotics (သို့မဟုတ်) ဒုတိယမျိုးဆက် antipsychotics အမျိုးအစားခွဲခြားထားတယ်။ သူတို့က schizophrenia ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်အလားတူနည်းလမ်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံအတိအကျမသိသော်လည်းထို antipsychotic ဆေးများသည် ဦး နှောက်ထဲရှိ dopamine နှင့် serotonin receptors များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။
Latuda နှင့် Abilify အကြားအဓိကကွာခြားချက်များကဘာလဲ။
Latuda နှင့် Abilify အကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာ၎င်းတို့တွင်မတူညီသောတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ Latuda တွင် lurasidone ပါဝင်ပြီး Abilify တွင် aripiprazole ပါရှိသည်။
Latuda သည် schizophrenia နှင့်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါတို့ကိုကုသရန် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကိုခံတွင်းဆေးပြားအဖြစ် ၂၀ မီလီဂရမ်၊ ၄၀ မီလီဂရမ်၊ ၆၀ မီလီဂရမ်၊ ၈၀ မီလီဂရမ်နှင့် ၁၂၀ မီလီဂရမ်တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Latuda သည်တစ်နာရီမှသုံးနာရီအတွင်းကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိသည်။ Latuda ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၂၀ သို့မဟုတ် ၄၀ မီလီဂရမ်ဖြင့်ကုသမှုခံယူနေသည့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ စတင်သည်။ ၎င်းကိုသောက်သင့်သည် ပိုကောင်းစုပ်ယူဘို့အစာနှင့်အတူ ။
Abilify သည် Fiza အားစိတ်ကြွဆေးနှင့်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေများဖြစ်သော bipolar disorder, autistic disorder နှင့် Tourette ၏ရောဂါတို့ကိုကုသရန် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ Abilify ကို2mg,5mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg နှင့် 30 mg တို့၏အားသာချက်များကိုပါးစပ်ဖြင့်တက်ဘလက်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပါးစပ်ဖြင့်ပြိုကွဲစေသောတက်ဘလက်၊ ပါးစပ်ဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းကဲ့သို့လည်းလာသည်။ Abilify ပါးစပ်ဆေးများသည်အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်သုံးနာရီမှငါးနာရီအတွင်းကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုအစာနှင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဖြစ်စေနိုင်သည်။
Latuda နှင့် Abilify အကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှု
မူးယစ်ဆေးအတန်း Antipsychotic Antipsychotic
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Lurasidone Aripiprazole
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? အရွယ်ရောက်သူများတွင် Schizophrenia:
တစ်နေ့လျှင် ၄၀ မှ ၁၆၀ မီလီဂရမ်ရှိသောဆယ်ကျော်သက်များ (အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်) အတွင်းရှိရှီဖိုရီးယား:
တစ်နေ့လျှင် 40 မှ 80 မီလီဂရမ် အရွယ်ရောက်သူများတွင် Schizophrenia:
တစ်နေ့လျှင် ၁၀ မှ ၁၅ မီလီဂရမ်ဆယ်ကျော်သက်များ (အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်) အတွင်းရှိရှီဇဖရီနီယား:
တစ်နေ့လျှင်2မှ 10 မီလီဂရမ်
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ကွဲပြားသည် - လူနာများကိုအခါအားလျော်စွာပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်သည် ကွဲပြားသည် - လူနာများကိုအခါအားလျော်စွာပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်သည်
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ ၁၀ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများ၊ မြီးကောင်ပေါက်များနှင့်ကလေးများ (ကုသမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်သည်) ၆ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများ၊ မြီးကောင်ပေါက်များနှင့်ကလေးများ (ကုသမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်သည်)
Latuda နှင့် Abilify မှကုသသောအခြေအနေများ
Latuda သည်အသက် ၁၃ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသောလူကြီးများနှင့်ကလေးများတွင် schizophrenia ကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါဖြစ်စဉ်များကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ၁၀ နှစ်အထက်ကလေးငယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်ကျရောဂါများကိုကုသရန်လည်းခွင့်ပြုထားသည်။
Abilify သည် schizophrenia ကို ၁၃ နှစ်နှင့်အထက်အသက်ကြီးသူများနှင့်ကလေးများတွင်လည်းကုသရန်အသုံးပြုသည်။ သို့သော် Latuda နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည် ၁၀ နှစ်နှင့်အထက်အသက်အရွယ်နှင့်ကလေးများအတွက်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောရောထွေးသို့မဟုတ်အရူးဖြစ်စဉ်များကိုကုသရန်အတည်ပြုသည်။ Abilify သည် Tourette ၏ရောဂါကိုလည်းကုသနိုင်သည် Tourette ရဲ့ရောဂါ နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ယားယံ။ နောက်ထပ်စိတ်ကျဆေးကုထုံးဖြင့်ပေးသည့်အခါ Abilify သည်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ (MDD) ကိုကုသနိုင်သည်။ Abilify ထိုးသည် schizophrenia နှင့် bipolar mania တို့မှလှုံ့ဆော်မှုလက္ခဏာများကိုကုသရန် FDA မှခွင့်ပြုထားသည်။
အခြေအနေ Latuda နာမ်
Schizophrenia ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
စိတ်ကြွရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောဂါ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Tourette ရဲ့ရောဂါ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Latuda သို့မဟုတ် Abilify ပိုမိုထိရောက်ပါသလား
Latuda နှင့် Abilify သည်အလွန်လေးနက်သော schizophrenia ကုသမှုအတွက်ဆေးဝါးများဖြစ်သည် စိတ်ရောဂါ ။ အကောင်းဆုံးကုသမှုသည်ကုသမှုခံယူရသည့်အခြေအနေ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်စသည့်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
meta-analysis သည် antipsychotics ဆေးများဖြစ်သော lurasidone, olanzapine, quetiapine, risperidone နှင့် paliperidone တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်သည်။ သုတေသီများက lurasidone သည်တွေ့ရှိခဲ့သည် အခြား antipsychotics နှင့်နှိုင်းယှဉ် schizophrenia ကုသသည်။ သို့သော် lurasidone သည်ကိုယ်အလေးချိန်နည်းပြီးအခြားပုံမှန်မဟုတ်သော antipsychotics များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထံမှနောက်ထပ် Meta-analysis သည် ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှု၏ကမ္ဘာ့ဂျာနယ် စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါကုသဘို့အခြား antipsychotics နှင့်အတူ lurasidone နှိုင်းယှဉ်။ လူနာ ၆၀၀၀ ကျော်နှင့်အတူစမ်းသပ်မှု ၁၀ ​​ခုကျော်ကိုဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော lurasidone, quetiapine, aripiprazole, olanzapine နှင့် ziprasidone အဖြစ် antipsychotics, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုက lurasidone aripiprazole နှင့် ziprasidone ထက်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်, ထိုသို့အခြား antipsychotics ထက်လျော့နည်းကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ငိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
Abilify နှင့် Latuda နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
FDA က Latuda ၏ယေဘူယျမူကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ယေဘူယျဗားရှင်းသည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရနိုင်သည်သို့မဟုတ်မရနိုင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သောမူးယစ်ဆေးတစ်ခုအနေဖြင့်လတ်ဒါသည်အာမခံဖြင့်ပင်စျေးကြီးနိုင်သည်။ Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်များသည်များသောအားဖြင့် Latuda ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ Latuda ၏ငွေသားစျေးနှုန်းမှာ $ 1,783.52 SingleCare ကူပွန်သည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ ၁၂၀၀ အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
Abilify ကိုယေဘူယျနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆေးဝါးအဖြစ်ရနိုင်သည်။ Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်အများစုသည် Abilify ကိုလွှမ်းခြုံလိမ့်မည်။ Latuda နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Abilify သည်စျေးသက်သာသောကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ငွေသားစျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၁,၀၅၉.၉၉ ခန့်ရှိပြီးစျေးကြီးနေဆဲဖြစ်သည်။ Abilify အတွက် SingleCare လျှော့စျေးကဒ်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ အောက်အထိကျနိုင်သည်။
အရေအတွက် ဆေးပြား ၃၀ (၄၀ မီလီဂရမ်) ဆေးပြား ၃၀ (၅ မီလီဂရမ်)
ပုံမှန် Medicare copay $ 7- $ 46 $ 3- $ 204
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 1,236 + $ 65 +
Abilify vs. Latuda ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Latuda ၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအိပ်ငိုက်ခြင်း၊ မငြိမ်မသက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရွေ့လျားခြင်း (akathisia)၊ ပျို့ချင်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Latuda ၏အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ကြွက်သားတောင့်တင်းခြင်း၊ တုန်ခါခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
Abilify ၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ပျို့ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ သက်သာခြင်းသို့မဟုတ်ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ မူးဝြေခင်း၊ ချုပ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မှုန်ဝါးခြင်း၊ akathisia နှင့်အိပ်မပျော်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ Abilify ၏အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာကြွက်သားတောင့်တင်းခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Latuda နှင့် Abilify နှစ်မျိုးလုံးသည်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နှင့်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Latuda နှင့် Abilify တို့၏ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်သွေးဖြူဥအရေအတွက်နည်းပါးလာခြင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းခြင်း (orthostatic hypotension) နှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများ (နောက်ကျသော dyskinesia) တို့ပါ ၀ င်သည်။
Latuda နှင့် Abilify တို့၏အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
အိပ်ငိုက် ဟုတ်တယ် ၁၇% ဟုတ်တယ် ၅%
Akathisia ဟုတ်တယ် 13% ဟုတ်တယ် 13%
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် ၁၀% ဟုတ်တယ် ၁၅%
အော့ ဟုတ်တယ် ၈% ဟုတ်တယ် ၁၁%
အစာ ဟုတ်တယ် ၆% ဟုတ်တယ် ၉%
အိပ်မပျော် ဟုတ်တယ် ၅% ဟုတ်တယ် ၁၈%
စိုးရိမ်ပူပန်မှု ဟုတ်တယ် ၅% ဟုတ်တယ် ၁၇%
မူးယစ်ဆေးဝါး ဟုတ်တယ် ၅% ဟုတ်တယ် ၃%
အလေးချိန်တိုးလာသည် ဟုတ်တယ် ၃% ဟုတ်တယ် ၃%
ခါးနာခြင်း ဟုတ်တယ် ၃% မဟုတ်ဘူး -
မှုန်ဝါး ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် ၃%
ပါးစပ်ခြောက် ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် ၅%
ဝမ်းချုပ်ခြင်း မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် ၁၁%
ခေါင်းကိုက်ခြင်း မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် ၁၀%
ကြွက်သားနာကျင်မှု မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် နှစ်ရာခိုင်နှုန်း
ရင်းမြစ် - DailyMed ( Latuda ), DailyMed ( နာမ် )
Abilify vs. Latuda ၏မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က
Latuda နှင့် Abilify သည်အဓိကအားဖြင့် CYP3A4 အင်ဇိုင်းဖြင့်အသည်းတွင် metabolized လုပ်သည်။ CYP3A4 inhibitors (သို့) CYP3A4 သွေးဆောင်မှုအဖြစ်ဆေးဝါးများနှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါ ၄ င်းတို့အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားရန်၊ ချိန်ညှိရန်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ketoconazole နှင့် ritonavir ကဲ့သို့သော CYP3A4 inhibitors အဖြစ်ဆေးဝါးများသည် Latuda သို့မဟုတ် Abilify အဆင့်များကိုတိုးပွားစေပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတိုးပွားစေသည်။ rifampin နှင့် carbamazepine ကဲ့သို့သော CYP3A4 သွေးဆောင်မှုအဖြစ်ဆေးဝါးများသည် Latuda သို့မဟုတ် Abilify အဆင့်ကိုလျော့နည်းစေပြီး antipsychotics ၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော quinidine နှင့် fluoxetine ကဲ့သို့သော Abilify နှင့် CYP2D6 inhibitors များကိုပေါင်းခြင်းဖြင့် Abilify အဆင့်နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သွေးတိုးရောဂါဖြစ်စေသောဆေးများသို့မဟုတ်ဘင်ဇိုဒီးဇီးပီများအသုံးပြုနေစဉ်လူးဒါနှင့်အဘီလီဖင်အသုံးပြုမှုကိုစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်ရှောင်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤဆေး antipsychotic ဆေးများကိုအလွန်အကျွံမသောက်သောဆေးများဖြင့်သောက်ခြင်းသည်သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ Benzodiazepines သည်သက်သာစေနိုင်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို Latuda သို့မဟုတ် Abilify ကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Latuda နာမ်
စိုင်းထီးဆိုင် CYP3A4 inhibitors ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
စိန့်ဂျွန်ရဲ့ Wort CYP3A4 သွေးဆောင် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Paroxetine CYP2D6 inhibitors မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Losartan သွေးတိုးရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Lorazepam Benzodiazepines ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Latuda နှင့် Abilify ၏သတိပေးချက်များ
Latuda နှင့် Abilify နှစ်ခုစလုံးသည်အနက်ရောင်သေတ္တာသတိပေးချက်များကိုသယ်ဆောင်သည် antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသက်ကြီးများမှယူသောအခါသေခြင်းနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များမြင့်တက်လာသည်။ Latuda နှင့် Abilify ကိုအသုံးပြုသောကလေးများနှင့်လူငယ်များသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသည့်အတွေးများနှင့်အပြုအမူများကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Latuda သို့မဟုတ် Abilify ကိုသောက်နေစဉ်တွင်လူနာငယ်များသည်ရောဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းသို့မဟုတ်အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများတွင်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ယာယီသွေးကြောဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်ခြင်းကဲ့သို့သော cerebrovascular ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများမြင့်တက်လာသည်။ Latuda သို့မဟုတ် Abilify ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်လည်းအန္တရာယ်ရှိသည် neuroleptic ကင်ဆာရောဂါ ကြွက်သားတောင့်တင်းခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းစသည့်လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် (NMS) ။ NMS သည်ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်သည့်ပြင်းထန်သောအခြေအနေဖြစ်သည်။
Latuda နှင့် Abilify တို့ကဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ - သကြားဓာတ်မြင့်မားခြင်း၊ လက်စထရောအဆင့်တိုးခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤဆေးများသည်သွေးဖြူဥအရေအတွက်နည်းပါးလာခြင်း၊
Latuda သို့မဟုတ် Abilify မသုံးမီအခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောသတိပေးချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
Latuda vs. Abilify နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Latuda သည်စိတ်ကြွစိတ်ရောဂါသက်သာစေသောဆေးဖြစ်သည်။ schizophrenia နှင့်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါဖြစ်စဉ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသောဖြစ်စဉ်များကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုပါးစပ်ဖြင့်တက်ဘလက်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ Latuda များသောအားဖြင့်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်အစာစားသည်။
Abilify သည်ပုံမှန်စိတ်ရောဂါပျောက်ကင်းစေသောဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် schizophrenia နှင့်ရောနှောခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွစိတ်ကြွစိတ်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောရောနှောနေသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ Abilify ကိုလည်းအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောဂါနှင့် Tourette ရဲ့ရောဂါကုသရန်အတည်ပြုသည်။ ၎င်းကိုပါးစပ်ဖြင့်တက်ဘလက်၊ နှုတ်အားဖြင့်ဖြိုခွဲခြင်း၊ နှုတ်ဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းများအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ Abilify ကိုအများအားဖြင့်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်အစားအစာဖြင့်ဖြစ်စေ၊
Latuda နှင့် Abilify အတူတူလား?
Latuda နှင့် Abilify နှစ်မျိုးလုံးသည် schizophrenia ကိုကုသရန်အတည်ပြုထားသော atypical antipsychotics သို့မဟုတ်ဒုတိယမျိုးဆက် antipsychotics များဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကွဲပြားသောဆေးညွှန်းပုံစံများဖြင့်လာပြီး schizophrenia မှလွဲ၍ အခြားလက္ခဏာများရှိသည်။ Latuda သည်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါဖြစ်သည့်ငါစိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါဖြစ်စဉ်များကိုကုသပေးပြီး Abilify သည်စိတ်ကြွစိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါဖြစ်စဉ်ကိုကုသသည်။ Latuda ကိုအစာနှင့်လည်းစီမံရန်လိုအပ်ပြီး Abilify ကိုအစားအစာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဖြစ်စေအုပ်ချုပ်နိုင်သည်။
Latuda သို့မဟုတ် Abilify ပိုကောင်းသလား
Latuda နှင့် Abilify သည် schizophrenia နှင့်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေများအတွက်ထိရောက်သောဆေးများဖြစ်သည်။ Latuda သည် Abilify နှင့်အခြား antipsychotic ဆေးများကဲ့သို့ထိရောက်နိုင်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အလေးချိန်တိုးလာသည် ။ Latuda သို့မဟုတ် Abilify ကိုရွေးသောအခါကုန်ကျစရိတ်ကဲ့သို့သောအခြားအချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုနည်းလမ်းအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည် Latuda သို့မဟုတ် Abilify ကိုသုံးနိုင်ပါသလား။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် Latuda နှင့် Abilify ကိုသုတေသနပြုရာတွင်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဤ antipsychotic ဆေးများသည်တတိယသုံးလပတ်အတွင်းမွေးကင်းစကလေးများအတွင်း extrapyramidal သို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အကျိုးကျေးဇူးများသည်အန္တရာယ်များထက်သာလွန်မှသာလျှင်၎င်းတို့ကိုသာယူသင့်သည်။ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း Latuda သို့မဟုတ် Abilify ကိုသုံးသင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်အတွက်သင့်ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူကိုဆက်သွယ်ပါ။
အရက်နှင့်ငါ Latuda သို့မဟုတ် Abilify ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
အရက်နှင့် antipsychotic ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) စိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ antipsychotics ဆေးကိုအရက်ဖြင့်သောက်ခြင်းသည်ငိုက်မျဉ်းခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းကဲ့သို့သောအချို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Latuda သို့မဟုတ် Abilify ကိုသောက်နေစဉ်အရက်သုံးစွဲခြင်းကိုကန့်သတ်သင့်သည်။
Latuda ဟာစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး။ Latuda သည်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါဆေးဝါးဖြစ်ပြီးစိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါဖြစ်စေသည့် Lithobid (လီသီယမ်) သို့မဟုတ် Depakene (valproic acid) တို့နှင့်အတူစိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူစိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါကုသမှုနှင့်အတူညွှန်းသည်။ antipsychotic ဆေးဝါးများ၏အခြားဥပမာများဖြစ်သော Invega (paliperidone), Seroquel (quetiapine), Zyprexa (olanzapine), Geodon (ziprasidone) တို့ဖြစ်သည်။ Rexulti (brexpiprazole) နှင့် Vraylar (cariprazine) ။
ယေဘူယျ Latuda မူကွဲကို FDA မှအတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ယေဘူယျ Latuda မူကွဲကိုစျေးကွက်တွင်မရနိုင်ပါ။ ယေဘူယျ Latuda ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သော Accord Healthcare, Piramal Healthcare UK Limited နှင့် Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
သင် Latuda ကိုအစာနှင့်မစားလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
အစာမစားဘဲလတ်ဒါသည်ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Latuda ကိုအနည်းဆုံးကယ်လိုရီ ၃၅၀ ဖြင့်အကောင်းဆုံးစုပ်ယူရန်အတွက်အကြံပြုသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအစာနှင့်အတူသောက်သောအခါနှစ်ဆတိုးလာသည်။
Valtrex သည် shingles များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်မည်မျှကြာသနည်း
သင်ရုတ်တရက် lactose သည်းမခံနိုင်သောသူဖြစ်လာနိုင်သလား။
မြင့်ရန် tylenol 3s မည်မျှ
ကန်ဖို့ vyvanse ဘယ်လောက်ကြာလဲ